Kiobà sy Etazonia : latsabato hanaovana fahirano · Global Voices teny Malagasy
Betsaka ny antony, araka izay fomba fijery tiana horaisina
Nandika (fr) i PREPA ECT2
Voadika ny 18 Novambra 2019 5:04 GMT
Vakio amin'ny teny 繁體中文, 简体中文, Español, বাংলা, Français, English
Ny efitrano fanaovana Fivoriamben'ny Firenena Mikambana, ao New York – Sary Luke Redmond, ao amin'ny flickr, nampiasàna ny lisansa Creative Commons.
Omaly, nolanian'ny fivoriamben'ny Firenena Mikambana ny fanambaràna iray manameloka ny fahirano ataon'ny amerikàna. Fito ambin'ny folo taona nisesy izao [amin'ny teny anglisy daholo ny rohy manaraka], nanohana hatrany ny fanambaràna nataon'i Kiobà ny latsabato natao, ary marobe ireo bilaogera – avy any ivelany na tao Kiobà ihany koa – naneho hevitra momba ilay lohahevitra.
The Cuban Triangle tonga dia nanao hintsin-dàlana:
Betsaka ny antony, araka izay fomba fijery tiana horaisina, mba tsy hijerena ity raharaha ity. Laharampahamehana io ho an'ny diplaomasia kiobàna. Hatolotra amin'ny adihevitra ireo fanamafisana avy amin'i Kiobà momba ireo vokatra ratsy aterak'ilay fahirano amin'ny toekareny (3.77 lavitrisa dolara tamin'ny 2007), tarehimarika tsy hita hohamarinina ary tsy mandray ho anaty kajikajy ny sandan'ny politika ara-toekarena noraisin'i Kiobà manokana. Tsy misy fiantraikany ilay fanambaràna ary tsy azon'ny Firenena Mikambana atao ny hampihatra azy. Amafisin'ilay fanambaràna fa itsakitsahan'ilay fahirano ny lalàna iraisampirenena, toy ny hoe tsy zon'i Etazonia ny mihataka tsy hifampiraharaha ara-barotra amin'ny firenena hafa. Ao anatin'ny adihevitra, handeha lavidavitra kokoa i Kiobà ary hanondro ny politikan'i Etazonia ho “famonoana olona” ary tsy hoe fotsiny tamin'ny fomba mandresy lahatra, fa toy ny zavamisy iray miainga avy amin'ny lalàna iraisampirenena.
Child of the Revolution manaiky hoe ilay latsabato « dia tsy mamatotra na amin'inona na amin'inona, ary tsy midika zavatra goavana ny fampiharana azy” saingy ekeny fa :
Midika fandresena iray ho an'ny fampielezankevitry ry Castro mirahalahy anefa io.
Velom-panantenana ny Havana Times ny amin'ny mety ho zavatra hafa entin'ilay latsabato, indrindra fa mazava ny hoe mpitantana vaovao amerikana no handray ny fifehezana ny governemanta amin'ny 2009 :
Na tsy mamatotra na amin'inona na amin'inona aza ilay latsabato, amin'ny Janoary dia hisy mpitantana vaovao amerikàna handray ho anaty kajikajiny ny fomba fijerin'izao tontolo izao, na hanohy ireo habibiana natao an'ireo Kiobàna mpifanila vodirindrina, efa natao nandritra ny 50 taona mahery eo ho eo.
The Cuban Triangle dia isan'ireo mihevitra hoe nampiasaina hampahatsiahivana zavatra vitsivitsy ho an'ny vahoaka ilay latsabato :
Voalohany, hain'i Kiobà ny fomba fampiasàna ny atao ho diplaomasia marolafy.
Faharoa, raha betsaka ireo governemanta mankato ireo kiana novolavolain'i Etazonia momba ny fanajàn'ny Kiobàna ny zon'olombelona, saika izy rehetra mihitsy no miara-manaiky, araka ny voalazan'ilay fanambaràna, ny zavamisy hoe ireo famaizana ataon'i Etazonia dia misy “vokany ratsy” amin'ny vahoaka kiobàna.
Ary azo lazaina ho ny rehetra no vonona hanao latsabato hanaingàna an'i Etazonia hanaisotra ilay fahirano.
Fahatelo, raha toa ny mpitantana vaovao amerikàna ka manapaka hevitra ny hiaraka miasa akaiky amin'ireo mpifanome tànana aminy sy ireo firenena hafa momba ny olana kiobàna, dia mijanona ho sàkana ireo famaizana apetrak'i Etazonia – ny fahirano ary hatramin'ireo hetsika mivantana atao amin'ireo banky sy orinasa avy amina firenena madinika iray.
Mandritra izany fotoana izany, nataon'ny El Cafe Cubano izay hisarihana ny saina amin'izay lazainy fa tena olana marina:
Tsy mahagaga tokoa ve…” Ny Alarobia lasa teo, tao amin'ny fivoriamben'ny Firenena Mikambana, nofidian'ny maro an'isa ny fanaisorana ny fahirano ara-toekarena napetrak'i Etazonia efa ho dimy amby efapolo taona atao amin'i Kiobà ambany fitarihan'ireo kaominista.
Ekena… Ary mba manao ahoana izao ireo FIFIDIANANA MALALAKA sy ny DEMAOKRASIA ?
Farany, Generacion Y, monina ao La Havane, nanampy fomba fijery iray mahaliana :
Vinaniako mialoha ny ho vokatry ny latsabato ary iriako ny hanaitra momba ny fahirano iray mbola mihatra isanandro. Izy io dia manakana ahy tsy hiditra na hivoaka an-kalalahana ny fireneko, tsy ho afaka mikambana anaty vondrona politika na hanangana orinasa kelim-pianakaviana.
Fahirano anatiny, naorina avy amin'ny faneriterena, fifehezana ary ny sivana, izay nitondra fatiantoka ara-pitaovana sy ara-tsaina tsy hita pesimpesenina ho an'ireo Kiobàna .
Manapaka hevitra ny hivoaka aho hividy gazety Granma - izay tena ilàna ezaka goavana tokoa – ary hiezaka ny hahita izay nivoaka avy tamin'ilay adihevitra atao androany ao amin'ny Firenena Mikambana. Mivoaka eny an'arabe aho ary ny tonga dia mahasarika ny masoko, dia mitohy ireo faneriterena apetrak'ireo mpitondra anay, io rindrina io, tsy hisy androany olona hifidy ny handrodanana an'io ao amin'ny ONU.